Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay oo ka walaacsan khilaafka madaxda siyaasadda Soomaaliya. - Wargeyska Faafiye
Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay oo ka walaacsan khilaafka madaxda siyaasadda Soomaaliya.
Wakiillada Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Danjire Nicholas Kay iyo Danjire Michele Cervone ayaa walaac ka muujiyay khilaafka sii xumaanaya ee u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo raysul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed.
War-saxaafadeedyo ka soo kala baxay xafiisyada Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay ayaa lagu shegay in xiisadda siyaasadeed ee u dhaxeysa madaxda siyaasadda Soomaaliya ay waxyeelleyneyso horumarrada la doonayo in la sameeyo ka hor inta aan la gaarin sanadka 2016.
Waxay ugu baaqeen madaxweynaha iyo raysul wasaaraha inay khilaafkooda meel iska dhigaan, una midoobaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen duruufaha adag ee ay ku jiraan shacabkooda.
Waxay ka digeen mooshin ka dhan ah raysul wasaaraha oo la sheegay inay wadaan qaar ka tirsan xildhibaannada baarlamaanka, iyagoo ku tilmaamay inuu kaga sii darayo xasaradda siyaasadeed ee ka taagan dalka.
Qaramada Midoobay, Midowga Yurub, IGAD, AMISOM, Mareykanka, UK iyo dalalka deriska la ah Soomaaliya ayaa iska kaashanaya sidii xal looga gaari lahaa khilaafka madaxda sare ee Soomaaliya.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsMadaxweyne Xasan Oo Ka Tacsiyeeyay Geeridii Halyeygii Saxaafadda Soomaalida.DOWLADA MAREEYKANKA OO WEERARTAY AL-SHABAABKhudbadii Kaaliyaha Xoghayaha Guud u Qaabilsan Arrimaha Siyaasadda ee ku aadan SomaliaM/Shariif oo Afgooye tagay.Diyaarada Turkish Airlines oo Goordhow soo Caga Dhigatay Muqdisho.